Suuqa Iibka Ciyaartoyga Oo Maanta Xidhmaya Iyo Shantii Saxeex Ee Ugu Wanaagsanaa Ee Illaa Hadda Ay Sameeyeen Kooxaha Ingiriisku - Latest football news
Suuqa Iibka Ciyaartoyga Oo Maanta Xidhmaya Iyo Shantii Saxeex Ee Ugu Wanaagsanaa Ee Illaa Hadda Ay Sameeyeen Kooxaha Ingiriisku
Waxa maanta oo Khamiis ah xidhmaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyga ee bisha January oo furnaa muddo 31 maalmood ah, waxaana ay kooxaha qaaradda Yurub wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan inay kusoo xero geliyaan ciyaaryahannada ay u baahan yihiin ee ka caawin kara hammigooda illaa dhamaadka xili ciyaareedkan.
Kooxaha Ingiriiska qaar ka mid ah ayaa ka faa’iidaystay muddadaas bisha ah ee uu suuqu furnaa, waxaase naadiyada faa’iidada ugu badan ka helay hoggaaminaysa Chelsea oo si ay uga baxdo dhibaatada haysata samaysay dhaqdhaqaaqa ugu badan.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shantii saxeex ee ugu muhiimsanaa ee illaa hadda ay kooxuhu sameeyeen
Gonzalo Higuain -> Chelsea
Chelsea ayaa heshiis amaah ah kusoo qaadatay weeraryahanka reer Argentine ee Higuain si uu uga caawiyo gool-dhalinta oo dhibaato badan ka haysato, waxaana uu booska kala baxay Morata oo ka degay Atetlcio Madrid.
Koobka ugu horreeya ee uu kula guuleysan karo waa Carabao Cup oo ay finalka joogto Blues, sidoo kalena waxa uu gacan ka siin doonaa FA Cup oo wareegga shanaad ay usoo gudubtay, laakiin waxaanu u ciyaari doonin Europa League oo uu hore ugu saftay AC Milan.
Christian Pulisic -> Chelsea
Chelsea ayaa nasiib u yeelatay in kooxo badan oo kula tartamayey ay ku garaacdo saxeexa laacibka khadka dhexe ee Christian Pulisic oo ay £58 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Borussia Dortmund, hase yeeshee waxa uu xiddiga reer Maraykan iman doonaa Blues dhamaadka xili ciyaareedkan.
Dominic Solanke -> Bournemouth
Laacibkii da’da yaraa ee Liverpool ayaa ugu dambayn ku biiray Bournemouth oo ka bixisay £17 milyan horraantii bishan, waxaana uu sidaas kusoo afjaray 18 bilood oo uu ka tirsanaa kooxda hoygeedu yahay Anfield oo uu markii hore uga soo wareegay Chelsea.
21 jirkan reer England ayaa ka garab ciyaari doona marka uu dhaawaca kasoo laabto Callum Wilson iyo Josh King.
Ryan Babel -> Fulham
Laacibkii hore ee Liverpool garabka weerarka uga ciyaari jiray ayaa kusoo laabtay horyaalka Premier League oo uu ka maqnaa siddeed sannadood, waxaana uu ku biiray Fulham isaga oo kasoo kicitimay Besiktas, lamana sheegin lacagta uu ugu soo biiray.
Oumar Niasse -> Cardiff
Laacibka xulka qaranka Senegal ee Oumar ayaa heshiis amaah ah kaga baxay kooxda Everton, waxaanu ku biiray Cardiff oo heshiiskiisa ka dhigi karta mid rasmi ah.
Laacibkan oo Everton ay lacag dhan £13.5 milyan kaga soo iibsatay Lokomotiv Moscow sannadkii 2016 ayaa ku saldhigi waayey Goodison Park, waxaana uu ugu dambayn ka degay Cardiff City.